कुन बार जन्मिएका मानिसले कति धन कमाउछन् ! हेर्नुहोस आफ्नो भाग्य परीक्षा
जनवरी 10, 2019 साइन्स इन्फोटेक	3 Comments ज्योतिषशास्त्र, धन, बार
ज्योतिषशास्त्रका अनुसार जुन बार जन्मियो त्यो बारको ग्रहको प्रभाव जीवनका सबै पाटामा पर्छ । मान्छेको स्वभाव र भाग्य समेत जन्मबारले निर्धारण गर्ने ज्योतिष शास्त्रीको दावी छ । आइतबारको दिन सूर्यको हो भने सोमवारको मुख्य ग्रह चन्द्र हो । मंगलवार मंगलको प्रभाव हुन्छ भने बुधवार बुधको । विहीबार वृहस्पति र शुक्रवार शुक्रको प्रभाव सबै भन्दा बढी हुन्छ । शनिवारको कारक ग्रह शनि मानिन्छ । कस्तो हुन्छ कुन बार जन्मिनको मान्छेको स्वभाव र भाग्य थाहा पाउनुस् ।
← मालिसका फाईदाहरू
होसियार ! भुलेर पनि नखानुस् यी ५ ब्यक्तिले लसुन नत्र ज्यान पनि जान सक्छ ! →
डिसेम्बर 30, 2018 साइन्स इन्फोटेक 1
3 thoughts on “कुन बार जन्मिएका मानिसले कति धन कमाउछन् ?”